पार्टी स्कुलिङबारे – जन बिहानी राष्ट्रिय मासिक
October 23, 2021 October 23, 2021 जन बिहानीLeaveaComment on पार्टी स्कुलिङबारे
स्कुलिङको तात्पर्य के हो ? हामीले हाम्रा भनाइहरूको सुरुआत यहाँबाट गर्नुपर्छ । हामीले कमरेडहरूलाई केही पनि नजात्रे भनेर यहाँ यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा जम्मा गरेका होइनौँ । तपाईंंहरू जुन ब्युरो समितिबाट यहाँ आउनुभएको छ, जुन जिल्ला समितिहरूबाट वा जुन एरिया समितिहरूबाट यहाँ आउनुभएको छ, निश्चित रूपमा तपाईंहरू सबै नेताहरू हुनुहुन्छ । तपाईंहरू सबै आआफ्नो स्थानमा प्रशिक्षक पनि हो । तपाईंहरूले हमेसा नेपालमा क्रान्ति आवश्यक भएको, नेपालको जनवादी क्रान्ति, जसलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति भनेका छौँ, त्यसको पथप्रदर्शक सिद्धान्त भनेको माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मानेका छौँ, त्यसलाई ग्रहण, प्रयोग र विकास गर्नुपर्ने तथ्यको प्रशिक्षण गर्दै आउनुभएको छ र त्यो क्रान्तिका लागि सामान्य कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भएको विषयमा नेपाली जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै आउनुभएको छ । त्यसैका आधारमा नेपाली जनतालाई, नेपालको सर्वहारा वर्गको पार्टीको वरिवरि सङ्गठित गर्दै र पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बदल्नका लागि सङ्घर्ष चलाउँदै पनि आउनुभएको छ । यति हुनु भनेको अहिलेको सापेक्षतामा कुशल प्रशिक्षक हुनु पनि हो । तपाईंहरू आफैँ कुशल प्रशिक्षक पनि हो । फेरि पनि, हामीले सिनियर कमरेडहरूको टिमलाई यहाँ उपस्थित गरेका छौँ र पार्टीको पहलकदमीमा स्कुलिङ विभागले आयोजना गरी यो स्कुलिङ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
के हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचण्ड–बाबुराम ‘स्कुल अफ थट’ ले कसरी काम गरेको भत्रे थाहा पाउन सक्छौँ ? वा कसरी थाहा पाउँछौँ ? के तपाईंहरूले यसका बारेमा केही सोच्नुभएको छ ? म तपाईंहरूलाई एउटा सामान्य प्रश्न सोध्छु– तपाईंहरूले यो स्कुलिङ कार्यक्रममा आउँदा माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, चारु, एभाकियन, अजित, गोन्जालो वा कुनै समकालीन कम्युनिस्टहरूका विचारहरू भएको समाजवादबारे बहस गरेको कुनै पुस्तक झोलामा हालेर ल्याउनुभएको छ ? मैलै दस सेकेन्ड रोकेर हेर्दा पनि कसैको सकारात्मक आवाज सुनिएन र कसैको हात पनि उठेन । यही हो प्रचण्ड ‘स्कुल अफ थट’ को प्रभाव भनेको । किनभने प्रचण्ड–बाबुराम ‘स्कुल अफ थट’ ले पछिल्लो चरणमा कार्यकर्ताहरूलाई चन्दा सङ्कलन गर्ने, रुपैयाँ पैसा जम्मा गर्ने, पद र प्रतिष्ठाका लागि झगडा गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, सिद्धान्त र नीतिबारे पूरै बेवास्ता गर्ने बनायो । सिद्धान्तले खान दिन्छ ? खानका लागि रुपैयाँ चाहिन्छ भत्रे बनायो ? जनता–सन्ता के मतलब, पहिले आफ्नो दुनो सोझो हुनुपर्छ भत्रे बनायो । हुन पनि किन नहोस्, त्यहाँ क्रान्तिको मुद्दा समाप्त भयो । देशको परिवर्तन, सामाजको आमूल रूपान्तरण समाप्त भयो । उनीहरू अहिले जनतालाई झुक्याउनका लागि विकास र निर्माणको रित्तो बाजा बजाउँदै हिँडेका छन् । नगराले बाजा, (ठाडो ढोलजस्तो देखिने पन्चे बाजा, अहिले लोप भैसकेको छ), हान्दा आवाज आउँछ, चर्को आवाज आउँछ तर भित्र केही हुँदैन, त्यस्तै प्रचण्ड–बाबुरामहरू, केपीहरूको मुखमा जनताको आवश्यकताको नगराले हान्दा आवाज आउँछ, विकास र निर्माणको तर भित्र पूरै खाली छ, ढोलको पेटजस्तै खाली छ । अझ उनीहरू त्यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न खोज्छन् । अहिले उनीहरू त्यही खाली आवाज लिएर हिँडिरहेका छन् । अनि त्यहाँ भएका कार्यकर्ताहरूले के गर्ने ? आर्थिक विकास त गर्ने तर देशका लागि आर्थिक विकास हुन देश स्वाधीन हुनुप¥यो, प्राकृतिक स्रोतहरू राज्यको हातमा हुनुप¥यो, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न राज्यले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको संरक्षण गर्नुप¥यो, देशका सम्पूर्ण जनतालाई उत्पादनमा सहभागी बनाउनुप¥यो, बजेटको योजनाबद्ध खर्च र देखिने क्षेत्रमा लगानी हुनुप¥यो । त्यो कुनै पनि सम्भव हुने भएन । त्यसो भएपछि आर्थिक उत्रति केमा जाने भयो ? आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक उत्रतिमा जाने भयो । त्यो कसरी हुन्छ ? त्यो भ्रष्टाचारबाट, तस्करीबाट, चोरीडकैतीबाट, मान्छेको बेचबिखनबाट हुने भयो । तपाईंहरूले सुत्रुभएको छ नि, जति श्रममन्त्री हुन्छन् उनीहरूले युवकयुवती बिक्री गर्न करोडाँैको कमिसन खाने गर्छन् । त्यसो भएपछि यो त के भयो ? हिजो काङ्ग्रेस, एमालेहरूले जे गरेका थिए त्यही भयो । त्योभन्दा केही फरक भएन । यो ‘स्कुल अफ थट’ ले उनीहरू त रसातलमा डुबे तर हाम्रो पार्टीलाई पनि छाडेन ।
म भन्दै थिएँ, तपाईंको झोलामा कुनै किताब छ जसले दर्शनशास्त्रका बारेमा, राजनीतिक अर्थशास्त्रका बारेमा, वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा वा अहिलेको प्रतिगामी राज्य व्यवस्थाका बारेमा नै लेखिएको किन नहोस् । छैन । किनकि प्रचण्ड–बाबुरामको ‘स्कुल अफ थट’ ले हामीलाई पनि के बनायो भने पढ्ने कामजति नेताहरूको नै हो । हाम्रो काम त पैसा उठाउने, पार्टीलाई दिने हो किनकि हामीलाई पार्टी चलाउन, कार्यकर्ताका समस्या समाधान गर्न र क्रान्ति गर्न पैसा चहिन्छ, रुपैयाँ चाहिन्छ भत्रे बुझिएको छ । यो सही पनि हो । गर्नु पनि परेको छ । तर मैले भनेको के हो भने यहाँ ‘स्कुल अफ थट’ को कुरा छ । यहाँ समाज बनाउन मैले पनि सोच्नुपर्छ भत्रे छैन । सबै नेताहरूले गर्छन् भत्रे छ । यो ‘स्कुल अफ थट’ भनेको प्रचण्ड–बाबुरामहरूको हो ।
यी विषयहरूमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाले महत्वपूर्ण सम्बोधन गरेको छ । यो नै नेपालमा जनवादी अथवा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्नका लागि पर्याप्त छ र यसले मात्रै साम्यवादमा पु¥याउँछ भनेको होइन । तर न्यूनतम् रूपमा हामीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन, माक्र्सवादी अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादका क्षेत्रमा केही त गरेका छौँ । त्यसले नेपालमा क्रान्ति सम्पत्र गर्ने, नेपाली जनतालाई गोलबन्द गर्ने र महान् उद्देश्यका लागि आमरूपमा मानिसलाई एकताबद्ध गर्ने काम त निश्चित रूपले गर्छ । यो तथ्य त स्थापित भैसक्यो नि त । हामीले भन्यौँ, वितपरीतहरूको एकत्वलाई यान्त्रिक रूपमा प्रयोग गर्ने मोहनविक्रम ‘स्कुल अफ थट’ र मोहनविक्रमको प्रयोगभन्दा विपरीत देखिने गरी प्रयोग गर्ने प्रचण्ड–बाबुराम ‘स्कुल अफ थट’ सारमा एउटै हो । त्यसको विपरीत यसलाई वैज्ञानिक तरिकाले वस्तुको व्युत्पत्ति, त्यसको गति र विनासको सम्पूर्णतामा बुझ्नुपर्छ भत्रे हाम्रो खोज अलि नयाँ होइन त ? यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको कुरा भयो । माक्र्सवादी अर्थशास्त्रमा हामीले भन्यौँ, ‘समाजवादमा जनता र नेताहरूको आर्थिक नियम फरक हुनुपर्छ । यसमा जनताको अर्थतन्त्र समाजवादी र नेताको अर्थतन्त्र साम्यवादी नियमअनुसार हुनुपर्छ किनभने माओले भनेजस्तै हरेक समाजमा दुई प्रकारका मानिस हुन्छन् ः एउटा अग्रगामी हुन्छ र अर्को पश्चगामी हुन्छ । उसको सोचाइ, विचार, व्यवहार सबै त्यसको चरित्रले निर्धारण गर्छ । पश्चगामीमाथि अग्रगामीको प्रभुत्व हुनुपर्छ । अब समाजवादमा सबै जनता साम्यवादका लागि तयार भैसकेको हँुदैन र विश्वको कुनै कुनामा पुँजीवाद रहुन्जेलसम्म त्यो सम्भव पनि हुँदैन । अथवा विश्वमा पुँजीवादी एउटा मात्र देश रहँदासम्म साम्यवादको घोषणा भयो भने त्यो असफल हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यो परिस्थितिले समाजवादी कालमा नेता हुने मानिसहरू निश्चित रूपमा अग्रगामी सोचाइ र चेतना भएकै हुन्छन् । जब जनता समाजवादमा हुन्छ त्यतिबेला नेताहरू साम्यवादी नीतिमा हुनुपर्छ । जब जनता समाजवादी अर्थव्यवस्था, ‘क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’ भत्रे नीतिमा हुन्छन् नेताहरू ‘क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको दाम’ को नीतिमा हुनुपर्छ । के यो समाजवादी अर्थशास्त्र अथवा माक्र्सवादी अर्थशास्त्रमा हाम्रो पार्टीले नयाँ गरेको होइन ? यो अर्थनीति अहिले नेपालमा वा भारतमा प्रयोग गर्ने हो भने यहाँका ९० प्रतिशत समस्या, एक प्रकारले, स्वतः समाधान हुन्छन् । भारतमा नोटबन्दी गर्नु पर्दैन । नेपालका कुनै पनि हाकिम र कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने र बदनाम हुनु पर्दैन । एमालेका भ्रष्टहरूले जस्तै कुनै पनि नेताहरूले प्लास्टिकको थैलोमा रुपैयाँ बेरेर घरको छतमा भएको पानी ट्याङ्कीभित्र लुकाउनु पर्दैन । जनताले क्षमताअनुसारको काम पाउने र कामअनुसारको व्यक्तिगत कमाइ गर्न पाउने तर नेताहरूले क्षमताअनुसारको काम गर्नुपर्ने तर व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न नपाउने नीति, नियम, कानुन संविधान भयो भने जनताले राम्रो नेता र नराम्रो नेताबारे छुट्ट्याउन गाह्रो हुन्छ ? हुँदैन । देश चलाउने नेताहरू भनेको पार्टीका नेताको मात्र कुरा होइन, राज्यका तीन अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित नीतिनिर्माताहरू देशका नेताहरू हुन् जसमा कार्यपालिकामा सचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरू, संस्थानका हाकिमहरू, बैङ्क तथा प्रतिष्ठानका प्रमुखहरू, सेना, प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतभन्दा माथिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापिकामा काङ्ग्रेस प्रतिनिधि (जसलाई अहिले सभासद्/सांसद भनिन्छ) मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदि, न्यायपलिकामा सर्वोच्च अदालतदेखि प्रादेशिक अदालतका न्यायमूर्तिहरू सबै नीतिनिर्माताहरू पर्छन् । मानिलिऊँ, उनीहरूले देशको नीति निर्माण गर्ने, देशको उत्रति गर्ने विश्वलाई कसरी सभ्य समाजमा बदल्न सकिन्छ भनेर खोजअनुसन्धान गर्ने तर व्यक्तिगत सम्पत्तिको पछि लाग्न नपाउने हो भने देशको स्थिति के हुन्छ ? के यो हामीले नयाँ गरेको होइन ? त्यस्तै वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा हामीले भन्यौँ, ‘दुनियाँलाई बुझ्ने र बदल्ने कुरा मात्र प्रमुख होइन, बदलेकोलाई रक्षा गर्नु पनि प्रमुख हो ।’ माक्र्सले भत्रुभएको थियो, ‘दुनियाँलाई बुझ्ने काम त बुर्जुवाहरूले पनि गरेका छन् । तर बदल्नु प्रमुख हो ।’ हामीले देख्यौँ, ‘दुनियाँ रुसमा बदलियो, चीनमा बदलियो तर रक्षा भएन । अब नारा दिनुपर्ने भयो, दुनियाँ बुझ्ने र बदल्ने काम भयो तर बदलेर मात्र भएन, त्यसको रक्षा पनि गर्नुप¥यो । के यो कुरा नयाँ होइन ?